トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi kuhloswe ekhoneni ezihlukahlukene e wamakhaza pachinko
Eminyakeni yamuva, sinalo ezandayo pachinko eshintsha ukufaka ekhoneni ezihlukahlukene. uhlangothi Ngokuvamile, sesisungule eceleni a amayunithi ezimbalwa modeli, ku Okunhlobonhlobo ekhoneni, futhi umise imodeli Ukucaciswa ezahlukene ngokuphelele ngamunye ngamunye. Kwake kwathi ngo-ethandwa kwakukhona onobuhle, ngokwanele ukubeka abahlanu baphinde bafaka eziyisithupha, ngenxa yezizathu ezifana ethandwa akukho msebenzi asisho anamathele, umfuziselo engasa sikunikeze ukukhetha kodwa ukususa, amakhasimende abafuna ukudlala namanje, noma bavunyelwa nokuba baphume amayunithi ambalwa nje, it has a ekhoneni ezihlukahlukene noma ithole ukudlala nostalgic ukwethula itafula esetshenziswa. Ngo
, ekhoneni ezihlukahlukene ezifana, izinzuzo kanye nebubi oluhlose, sizobheka ukuthi izinto.
Okokuqala, it is a inzuzo, kodwa awazi kahle iphuzu kukhetseka pachinko ezihlukahlukene imifanekiso ngoba emakhoneni adlala eziningi, wukuthi kuba lula izimpisi. Ngaphezu kwalokho, uvame ukuba amnandi nail ukulungiswa, bekuyoba Akumangalisi ukudlala.
Okunhlobonhlobo ekhoneni, kuze umshini ephezulu Spec kusukela Dejihane, kukhona ezihlukahlukene Ukucaciswa onobuhle. Ngaphambili, kodwa Dejihane lase afakwe amaningi, futhi ukwanda ehloniphekile ephezulu Spec umshini manje. Okunhlobonhlobo ekhoneni, ngakho ivame ukuba amnandi nail ukulungiswa kunamanye onobuhle, kulabo hit umshini Hanemono, ngubani Hanemono eziye elifakwe ezihlukahlukene ekhoneni, futhi kuzoba kungalindelekile noma amehlo inhloso ukuthi ujike kahle.
futhi Okunhlobonhlobo ekhoneni, kukhona emakhazeni pachinko ukuthi Rookie nail umculi kokuqala nje ukulungiswa nail ophethe, ngakho ungase ukuthole itafula umcebo ezingalindelekile Kukhona ukufiphala ngaphandle evamile nail ukulungiswa sobudala nail abahlengikazi umshaye, namanje abantu bahamba Hanemono nendawo amehlo inhloso.
Ngaphezu kwalokho, labo ukudlala ezihlukahlukene ekhoneni, sibe nabantu abaningi kakhulu ungazi pachinko. Ngo
muva nje, ngakho-ke noma ube imisebenzi eziyinkimbinkimbi ezifana latency ematfuba ukushintshashintsha, wena noma ngayeka ngaphandle kwesaziso eyayinegama ecashile. Ingabe kakhulu okungenzeka ukuthi bafake ungaphakathi ithebula ezifana Izinga eliphezulu okungukuthi, wena ekhoneni ezihlukahlukene.
futhi, njengoba bokwenza, ukufinyelela kanye nokusebenza imodeli ngamunye, nokuthi kumelwe kukhunjulwe ngakho konke ezahlukene, ngakho Dejihane ziningi, kuba ukuthi akukho specs kakhulu imodeli ukuthi kungaba umdlalo. Ngo Okunhlobonhlobo ekhoneni, onobuhle disparate isifakiwe ngamunye. Ngakho, bonke ukukhiqiza ezahlukene.
okuyinto ukufinyelela kuyinto, ukuthi noma ngezinga eliphezulu ngokuthembeka ukufinyelela, kufanele akhumbule ukuthi ukusebenza kohlelo, ngeke zisaba ukwazi ngisho nalapho wayeka ngesikhathi futhi baqhubeka. Uma kungenjalo eyaziwa nhlobo, ngisho ukuma ejika kahle kungakhathaliseki ukuthi nail ukulungiswa, ezinhle Horukon isethi, ngisho noma ngizizwa negagasi ROM kubukeka enza kahle, ngeke miss the iziteshi umdlalo.
Futhi okhuluma ezihlukahlukene, abaningi pachinko eshintsha ukuba ukudlala injongo eyinhloko, ke nakanjani iba ukufakwa eningi Dejihane. Uma
Dejihane, mnandi futhi nail ukulungiswa kancane, ngoba buthaka amandla kuqhume inkokhelo, akusiyo scary njengoba sasemakhazeni pachinko.
isifinyezo Hanemono, kukhona abantu abangekho Tachimawa 'ukuze Dejihane nendawo uzame ibuke futhi Okunhlobonhlobo ekhoneni? Kuzoba esiphethweni sokuthi. Uma, abaningi pachinko emakhazeni okungukuthi injongo eyinhloko ukuthi play, nakanjani Ziyanda ukufakwa Dejihane. Uma
isifinyezo Hanemono, kukhona abantu abangekho Tachimawa 'ukuze Dejihane nendawo uzame ibuke futhi Okunhlobonhlobo ekhoneni? Kuzoba esiphethweni sokuthi.